Madaxweyne iyo Madaxweyne ku xigeen wada socda | allsanaag
Madaxweyne iyo Madaxweyne ku xigeen wada socda
Maxaa diiday in Madaxweyne kasta oo ka Murashaxan Puntland in uu la yimaado ku xigeenkiisa.
Labo arimood oo jirta awgeed waxa khasab ah in Dastuurka Puntland waxa laga bedelo, gaar ahaan sida loo doorto madaxweynaha iyo Madaxweyne ku xigeenka Puntland.
Marka hore caalamka intiisa badani, marka ay doorasho timaado waxay u codeeyaan koox wada socota oo ah Madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen (Team), kuwaas oo wada shaqayni ka dhaxyso si ay u gaaraan hiigsigii ay lahaayeen to achieve their goal.
Tusaalaha ugu fiicani waa dalka Maraykanka oo marka Xisbigu ay doortaan Murashaxooda , oo isaguna raadiyo ku xigeenkiisa uu aaminsan yahay inuu la shaqayn karo, isaga oo la tashanaya siyaasiyiinta Xisbigiisa iyo Asxaabtiisa.
Murashaxa madaxweynnuha Maraykanku marka uu soo helo ku xigeenkiisa, ayaa iyaga oo wada socda oo koox ah waxay u wada ordaan madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen. Shacabka reer Americana waxay doortaan madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ay ka helaan siyasaddooda dhaqaale, amni, arimo dibadeed, caafimaad IWM. Kooxda ay ka heli waayaan siyaasadooda reer America waxay ku yiraahdaan Kab iyo xaarkeed waa laysla tuuraa.
Arinta labaad oo aan tusalaha u soo qaadnayno, waa arin aan caddalada ku ahayn madaxweynaha Puntland ama ku xigeenkiisa oo laysku khasbo markii horeba dad aan is aqoon oo aan wada shaqayn hore ka dhaxayn. Siyaasiyiinta reer Puntlandna intooda badana aqoon labada Murashax. Madaxweynaha Puntland marla dooranayo keligiis ayaa soo baxa sidoo kale madaxweyne ku xigeenku keligiis ayuu soo baxa. Waa waxa reer Hindiya yiraahdaan अलग-अलग alag alag, Soomaalidu tiraahdo keli keli, ingiriiskuna INDIVIDUAL
Tusaalaha labaad ee ugu fiican in Dastuurka Puntland u baahan yahay in wax laga bedelo , ayaa waxay tahay arinta ka dhex taagan madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas iyo ku xigenkiisa Abdihakin Camey oo khilaafkooda sabaabay in dawladdii Puntland ay curyaanto oo ay shaqayn waydo, Dhaawaca soo gaaray dawladda Puntlandna ayna sababtay in reer Villa Soomaliya ay ku soo dhiiradaan faragelinta dawladda Puntland iyo Murashaxiintooda
Ugu danbayntii si Reer Puntland caddalad u helaan iyo koox u shaqaysa, si madaxweynaha Puntland ee Murasharaxani caddalad u helo iyo ku xigeen la shaqeeya, si ku xigeenka Puntland ee la dooran doonaa u helo madaxweyne taladiisa qaata waa laga maarmaan in madaxweyne kasta ee ka murashaxan Puntland uu la yimaado ku xigeenkiisa oo Xildhibaada Puntland ay doortaan koox wada socota oo isa soo caashaqday oo jiibta isla heli karta.
← Caddaalad Wax Looma Qeeybin War saxaafadeed Gudoomiyaha Baarlamaanka →